ပါးလွှာပြီး စူထွက်နေတဲ့ အတွင်းသား အလှတွေနဲ့ ရေကူးကန်ထဲ မှာ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စားပုံတွေ ရိုက်တက် တဲ့ မော်ဒယ် မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ဗီဒီယို…. – Shwe Naung
ပါးလွှာပြီး စူထွက်နေတဲ့ အတွင်းသား အလှတွေနဲ့ ရေကူးကန်ထဲ မှာ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စားပုံတွေ ရိုက်တက် တဲ့ မော်ဒယ် မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ဗီဒီယို….
N N | June 17, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ ပုရိသ တွေရဲ့ အသည်းစွဲ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ် တဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေက ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင် နေတဲ့ ထူးခြားမှု တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စားပုံ လေးတွေဟာ ဆိုရင်လည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ ပေါ်တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက် များတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။ပါးလွှာပြီး စူထွက်နေတဲ့ အတွင်းသား အလှ တွေကို ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ် ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစား နေတာကို မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖက် ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ် တစ်နေ့ တစ်ခြား ပိုပြီး ထူးခြားလှပလာတဲ့
မိုးမြင့်သဇင်က ပုရိသတွေရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားကောက် ကြောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်အများစု အားကျ ချစ်ခင်နေ ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။သူမဟာ လတ်တလောမှာတော့ ရေကူးကန် ထက်က အမိုက်စားလှ ရက်လွန်းနေတဲ့
အလန်းစား ပုံလေးတွေကို ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ကဲ….ချစ်ပရိသတ် ကြီးတွက် မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
ခေးဆက်သွင် ရဲ့ TIK TOK ဆော့ကစားထား တဲ့ ဗီဒီယို…